इजरायल जान चाहनेलाई आयो खुसीको खबर : अब एक साता भित्र आवेदन दिन पाइने ! यस्तो छ प्रक्रिया « Bagmati Online
इजरायल जान चाहनेलाई आयो खुसीको खबर : अब एक साता भित्र आवेदन दिन पाइने ! यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडौ । इजरायलको रोजगारीमा जान चाहने नेपालीका लागि एक हप्ताभित्र अनलाइन आवेदन खुला हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनमार्फत आवेदन लिने तयारी गरी आवेदनको ढाँचासमेत तयार गरेर फागुनको पहिलो हप्ता खुला गर्ने भएको हो । अनलाइन आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको काम पूरा भएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
“इजरायल जाने नेपाली युवा छनोट गर्न बनेको कार्यविधि यही हप्ता मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र आवेदनको सूचनासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ,” महानिर्देशक दाहालले कारोबारसँग भने “इजरायल पक्षले छिटो श्रमिक पठाउन दबाब दिएका कारण मन्त्रालयले छनोट कार्यविधि स्वीकृतिका लागि हतारिएको छ ।” विभागले कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन र टाढा रहेका युवालाई घरबाटै आवेदन दिन सजिलो होस् भनेर अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । इजरायल र नेपालबीच असोजमा सम्पन्न श्रम सम्झौता र माघ ८ गते रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै आवेदनका लागि अनलाइन सेवा विस्तारको काम अघि बढाइएको थियो ।
इजरायलको सम्बन्धित निकाय र लामो अवधिको हेरचाह केन्द्रमा सञ्चार गर्नका लागि अंग्रेजी भाषामा दखल भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तीन महिनाको हेरचाहसम्बन्धी तालिम पूरा गरेका आवेदकले कक्षा १२ पास गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी एसईई तहको माध्यमिक शिक्षा पूरा गरी सरकारले तोकेको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त र सुपरिवेक्षण गरिएको संस्थाबाट व्यावहारिक १५ महिनाको नर्सिङ तालिम वा सामुदायिक औषधोपचार सहायक तालिम वा सुँडेनी तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । छनोट भएका नेपाली श्रमिकले रोजगारीका लागि गएपछि इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको खोप लगाएपछि मात्र कार्यक्षेत्रमा जान पाउने उल्लेख छ ।